တနိုင်းမြို့နယ်က တိုက်ပွဲရှောင် စခန်းတွေမှာဖျားနာသူတွေများလာတာကြောင့် ဆေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်း အလှူရှင်တွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေ – Voice of Myanmar
တနိုင်းမြို့နယ်က တိုက်ပွဲရှောင် စခန်းတွေမှာဖျားနာသူတွေများလာတာကြောင့် ဆေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်း အလှူရှင်တွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေ
ဒီဇင်ဘာ ၊ ၁၁ ၊ ၂၀၂၁
ကချင်ပြည်နယ် ၊ မြစ်ကြီးနားခရိုင် ၊ တနိုင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ တိုက်ပွဲရှောင် (IDPs) စခန်းတွေမှာ အချိန်အခါ မဟုတ် မိုးရွာသွန်းမှုတွေဖြစ်ပေါ်ပြီးနောက် အအေးမိ ဖျားနာ စတဲ့ ရာသီပေါ် တုတ်ကွေးရောဂါတွေ ဖြစ်နေတဲ့အတွက် ဆေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်း အလှူရှင်တွေ အရေးတကြီး လိုအပ်နေတယ်လို့ တိုက်ပွဲရှောင် ပြည်သူတွေကို ကူညီစောင့်ရှောက်ပေးနေတဲ့ နယ်ခံ ပရဟိတ သမားတွေက ပြောပါတယ်။
” ဟိုအရင်က အဲ့ဒီ တိုက်ပွဲရှောင် စခန်းတွေဟာ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်ပေးမှု အနည်းဆုံး ၁ လ ၊ ၁ ကြိမ် ပုံမှန် နီးပါး ရခဲ့ပေမယ့် အခုနှစ် ဧပြီလ နောက်ပိုင်းကစလို့ ကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုတွေ မရတော့ဘူး ၊ ဘာ့ကြောင့် မရတာလဲဆိုရင် ဟိုအရင်ကလို ဆေးနဲ့ ဆေးပစ္စည်း အလှူရှင်တွေ မရှိတဲ့ အတွက် ကျန်းမာရေး ဌာနက စောင့်ရှောက်မပေးနိုင်တာ ဖြစ်တယ် ” လို့ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းတွေကို ကျန်းမာရေး ကိစ္စ ကူညီ ဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ စေတနာ့ ဝန်ထမ်း တယောက်က ပြောပါတယ် ။
တနိုင်းမြို့နယ်မှာ လွန်ခဲ့တဲ့ ၄ နှစ်ကျော် ကစလို့ COC ၊ KBC. နဲ့ RC. ဆိုပြီး တိုက်ပွဲရှောင် IDPs စခန်း ၃ ခုရှိကာ တိုက်ပွဲရှောင် ပြည်သူ ၁ ထောင့် ၂ ရာကျော် ခိုလှုံနေကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ အရေအတွက်ထဲက စခန်း ၁ ခုမှာ ရာသီပေါ် တုတ်ကွေရောဂါကြောင့် ဖျားနာသူ ၂၀ ဦးထက်မနည်း ရှိတာလို့ သိရပါတယ်။
” အခုတလော Camp မှာက ဖျားနာတာတွေ ၊ တုတ်ကွေးဖြစ်တာတွေများတယ် ၊ အလှူရှင် မရှိတာကြောင့် ကျန်းမာရေး လုပ်သားတွေကလည်း လာမကြည့်နိုင်ဘူး
၊ ပြင်ပ ဆေးရုံ ဆေးခန်းမှာ ပြသ ကုဖို့ဆိုတာလည်း ငွေကြေးက အဆင်မပြေကြဘူးလေ ၊ ရိုးရာ တိုင်းရင်းဆေးတွေနဲ့ လက်လှမ်းမီသလောက် ကုနေရတာပါ ၊ အဲ့ဒါကြောင့် ဆေးနဲ ဆေးပစ္စည်း အလှုရှင်တွေ လိုအပ်နေတာ ” လို့ တိုက်ပွဲရှောင်စခန်းရဲ့ တာဝန်ရှိသူ တစ်ယောက်က ပြောပါတယ်။
ဒါ့အပြင် အခုရက်ပိုင်းမှာ တနိုင်းမြို့နယ်က စာသင်ကျောင်းတချို့မှာ ဆရာ ဆရာမနဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူတွေဟာ ကိုဗစ်ရောဂါပိုး ကူးစက်ခံထားရတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းစကားတွေကြောင့် တိုက်ပွဲရှောင် IDPs စခန်းက ခိုလှုံနေသူတွေဟာ ကျန်းမာရေးအတွက် ပူပန်နေကြတာဖြစ်တယ်လို့ လည်း သိရပါတယ်။
#voiceofmyanmar #VOM #တနိုင်းစစ်ဘေးရှောင်